SOMALITALK - MASAR
Sheekh Shariif Iyo Cabdiqaasim Oo Ku Kulmay Masar.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah Gudoomiyaha Isbihaysiga Dib u Xoraynta Somaliya, iyo Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo hore u ahaan jiray Madaxweynaha Dawlada Federaka ee Somaliya, ayaa kulamo ay soo qaban qaabisay Dawlada Masar ku yeelan doona maalmaha soo socda magaalada Qahira.
Dr. Cabdiqaasim ayaa si ba,an uga soo hor jeeda garabka ku sugan Asmara ee uu hogaanka u hayo Dahir Awey, wuxuuna ugu baaqay in ay joojiyaan qaska ay ka dhex alooseen Isbahaysiga.
Dr. Cabdiqaasim wuxu u soo jeediyay garabka Jabuuti, in aanay dhegta u dhigin Dahir Aweys iyo 36ka qof ee uu hogaaminayo, halka Sheekh Sharif kooxdiisa lagu qiyaasay 133 xubnood.
Dr. Cabdiqaasim ayaa hore ugu waramay Dawlada Masar dhibaatada haysta shacabka Soomaaliyeed iyo khilaafka soo kala dhex galay Isbahaysiga, iyo culayska wayn ee saaran beesha uu ka dhashay Dr. Cabdiqaasim.
Dawlada Masar ayaa soo dhawaysay dacwada uu soo jeediyay Dr. Cabdiqaasim, sidoo kale waxay sheegtay in ay wax ka qaban doonta khilaafka soo kala dhex galay Isbahaysiga.
Dawlada Masar ayaa soo dhawayn balaadhan u fidisay Sheekh Shariif, si ay uga wada hadlaan xaalada Somaliya iyo khilaafka Isbahaysiga dib u xoraynta Somaliya, Masar waxay sheegtay in ay kasoo hor jeedo garabka ku sugan Asmara.
Xasan Daahir Aweys ayaa marar badan ku gacan sayray isku dayo lagu doonayay in wada hadal loo furo isaga iyo Sheekh Shariif. Sidoo kale Daahir Aweys ayaa hore ugu gacansayray wafdi ka socday Dr. Cabdiqaasim oo la doonayay in Sheekh Shariif iyo isaga la isu keeno.
Waxaa la filaya ayaamaha soo socda in ay wada hadal yeelan doonan Dr. Cabdiqaasim iyo Sheekh Shariif, wada hadalkaas oo ay ku lafa guri doonan waxa ay ka yeeli doonaan garabka Asmara.
Waxaan ka war sugi doona qodobada ay ka soo saaran kulankaas ay labada Mas,ul yeelanayaan, qodobada badankooda ayaa lagu falanqayn doona wixii laga yeeli lahaa khilaafka Isbahaysiga iyo garabka jooga Asmara.